चिहानबाट बाँचेर फर्किँदा :: Setopati
नवराज पराजुली साउन २२
इस्तानबुल एयरपोर्टमा अड्किँदा- ३
संसारमा जति मान्छे 'अँध्यारोमा' मरेका छन् त्योभन्दा बढीलाई 'अँध्यारोले' मारेको छ।
ट्याक्सीको झ्यालबाट पुलुक्क बाहिर हेर्दा त्यो चिहानघारीभरी दर्जनौं बिराला हिँडिरहेका देखेँ। ती बिरालाहरू कसको मलामी आएका हुन्? मेरा हातभित्रका मुटुहरूले भने, 'सानो छँदा मैले बिरालोका बच्चाहरूलाई मेरै भागको दूधभात खुवाएको थिएँ। यो ड्राइभरले मलाई नराम्रो गर्न लागेको देखे भने, के यी बिरालाहरूले दूधको भार तिर्लान्?'
म नेपालीमा जे पायो त्यही बोल्न थालेँ। के बोलेँ, अहिले ठ्याक्कै याद छैन। तर नेपाली वाक्यहरूमा 'पुलिस' भन्ने शब्दलाई जथाभावी घुसाउन थालेँ। उसले पुलिस शब्द चाहिँ बुझोस् भनेर हरेकचोटि फरक-फरक तरिकाले उच्चारण गरेँ- पुलिस। पोलिस। प्वलिस।
जीवनमा अरूबेला धेरैचोटि मैले 'बाँचेको' अभिनय गरेको थिएँ। त्यतिबेला म 'बाँच्नलाई' अभिनय गरिरहेको थिएँ।
त्यस्तो के हुन सक्छ जहाँ म पुलिस शब्दलाई यति सजिलोगरी बोलौं कि उसलाई शंकै नहोस्? फ्याट्टै उपाय निस्कियो। प्रहरी शब्दको ठाउँमा पुलिस शब्द राखेर म त्यो ट्याक्सीको पछाडि मेरो लामो कविता 'प्रहरी' ढुक्कले वाचन गर्न थालेँ। त्यो मेरो जीवनको पहिलो 'ट्याक्सी कविता कन्सर्ट' थियो। पृष्ठभूमिमा डरको पियानो र आशाको बाँसुरीको लाइभ म्युजिक बजिरहेको थियो। एउटा श्रोता थियो। एउटा कवि थियो। र, गुडिरहेको सवारी थियो।
मैले अलि अघि सरेर अंग्रेजीमा भनेँ, 'हामी कतिखेर पुग्छौं?'
यसपालि उसले पहिलेजस्तो रिसाएर 'चुप' भन्ने इशारा गरेन। 'नो इङ्लिस' भनेर थर्काएन। उसले मोबाइल कारमा अड्याएर के-के थिच्यो। मलाई मोबाइलतिर इशारा गरेर 'बोल' भन्ने संकेत दियो। मैले उसको मोबाइल नजिकै मुख लगेर सोधेँ, 'हामी कतिखेर पुग्छौं दाजु?'
उसले 'अनलाइन अडियो कन्भर्टर' खोलेको रहेछ। मेरो बोलीलाई उसको मोबाइलले उसको भाषामा अनुवाद गरिदियो। उसले भन्यो, 'पुग्न लाग्यौं।'
म अलिकति खुसी त भएँ तर मनले भन्यो- 'पुग्न लाग्नु' सँग चित्त नबुझा। नपुगी सुरक्षित भइन्न। कहिलेकाहीँ पुग्न लाग्नु र पुग्नु बीचको दुरी असीमित दशमलव असम्भव किलोमिटर हुन्छ।
उसले केही मिनेट ट्याक्सी कुदाएपछि रोक्यो। र, त्यो कन्भर्टरमा भन्यो, 'तपाईंले भनेको ठाउँ यही हो। तपाईं पुग्नुभयो।'
उसले अर्को अर्थ नलाओस् भनेर मैले ख्याल गरेर सोधेँ, 'यो होटल किन यति शान्त? सबै पाहुनाहरू अघि नै सुतिसकेका हुन्?'
ती मालिक्नीले एकदमै अनौठो गरी हाँस्दै भनिन्, 'सुनसान हुनुमा पहिलो कुरा त निक्कै रात परिसक्यो। तपाईंको रूम बुक गरिदिने फिनल्यान्डको साथीले फोन गरिरहनुभएको थियो। म तपाईं कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर ढोका खोल्दै, हेर्दै, बन्द गर्दै पर्खिरहेकी थिएँ।
अनि दोस्रो कुरा- आजको मेरो पाहुना तपाईं मात्रै हो। घरमा अरू कोही छैन।'
लगत्तै उनले सोधिन्, 'तपाईं के चाहनुहुन्छ?'
मनमा हजारौं उत्तर बुरुरु आए, 'नेपाल जान चाहन्छु। घर जान चाहन्छु। भोकले प्यात्त भएको छु। तर अहिले केही खान चाहन्नँ। म युरोपका बाँकी देशमा कन्सर्ट गर्न पनि चाहन्नँ। पैसा/नाम केही कमाउन चाहन्नँ। अब जम्मा नेपालसम्म पुग्ने बाटो कमाउन चाहन्छु।'
मैले सारा चाहनालाई एउटै शब्दमा समेटेर भनेँ, 'वाइफाइ'।
मैले खोलिनँ। फेरि बज्यो। भित्रैबाट सोधेँ, 'को हो?'
मैले ढोका खोलेँ। ऊ आएर मलाई उसको फोन दिँदै भनी, 'तपाईंको फिनल्यान्डको साथी बोल्ने रे।'
मैले फोन लिएँ। सुवासले भन्यो, 'गुरु तपाईं पुगेको थाहा भयो। तपाईं र म त अहिले म्यासेन्जरमै पनि बोलौंला। तर मैले होटल मालिक्नीको फोनबाटै तपाईंसँग कुरा गरिसकेपछि तपाईंलाइ त्यहाँ केही समस्या हुन्न। मसँग अब यो कलको प्रमाण छ। ढुक्कले सुत्नुस्। भोलि सबै कुरा गरौंला।'
अघि एयरपोर्टमा एकछिन कुरा हुँदा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत महामहिम रमेशप्रसाद खनालले पनि भन्नुभएको थियो, 'नवराज बाबु, होटल जानुस्। दूतावासबाट हुने सहयोग म सप्पै गर्छु। इस्तानबुलमा म पनि बसेको छु। डराउनुपर्ने केही छैन।'
मैले फेसबुकको 'एम.आर.आर' भन्ने ग्रुपमा पोष्ट गरेँ। केटाहरूले सैयौं थोप्लो हानेर बुस्ट गरे। केही मिनेटमै मेरो म्यासेन्जरमा म्यासेज आयो।
'नमस्कार मेरो नाम उत्तम शर्मा। मलाई भर्खरै क्यानडाबाट राजेन्द्र पोखरेलले फोन गर्नुभएको थियो। तपाईं इस्तानबुलमा समस्यामा पर्नुभएको रहेछ। नआत्तिनुस्। अहिले जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ सुत्नुस्। मलाई त्यहाँको लोकेसन पठाउनुस्। हामी तपाईंलाई भेट्न भोलि बिहानै आउँछौं।'
आमाको दूध चुस्दाचुस्दै बच्चा निदायो। निदाएको बच्चालाई कोक्रोमा हाल्दै आमाले भनिन्, 'नुनु गर ल सानु? म मेलामा गएर आउँछु। अनि फेरि बुबु खाउली। हछ्?'
ब्युँझिएपछि हतारहतार होटलअगाडिको ढोकामा गएर 'उहाँ' हरू आउने बाटो हेर्न थालेँ।
ऋषिजीले मलाई अँगालो हाल्दै भन्नुभयो, 'नवराजजी। म तपाईंलाई चिन्दिनथेँ। कविता पनि सुनेको थिइनँ। तर क्यानडाबाट राजेन्द्रजीले जे भन्नुभयो, त्यति सुनेपछि रातभरी तपाईंका कविता सुन्यौं। यी हाम्रा आँखा राता भएका आधी चाहिँ रातभरी नसुतेर हो, आधी चाहिँ कविताले रूवाएर हो। कतिखेर उज्यालो हुन्छ र तपाईंलाई भेट्न जाऊँ जस्तो भयो।'
मैले नसोधी सासै फेर्न सकिनँ, 'राजेन्द्रजीले तपाईंलाई के भन्नुभयो?'
ऋषिजीले लामो सास फेरेर भरिलो स्वरमा भन्नुभयो, 'म त निदाइसकेको थिएँ। उहाँले आत्तिएजसरी फोन गरेर भन्नुभयो- ऋषिजी, नवराजजी इस्तानबुलमा समस्यामा पर्नुभएछ। तपाईंले जसरी पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो। उहाँले मलाई चिन्नुहुन्न। हाम्रो कहिल्यै कुरा भएको छैन। तर म जहिल्यै उहाँसँग कुरा गर्छु। म उहाँसँग कुरा गर्छु भन्ने कुरा उहाँलाई नै थाहा छैन। मैले अलि बुझिनँ अनि राजेन्द्रजीलाई भनेँ- राजेन्द्रजी, सहयोग त गरौंला तर उहाँ को हो?'
ऋषिजीले सोध्नुभएको रहेछ, 'नवराज पराजुली भनेको को हो?'
राजेन्द्रजीले भन्नुभएछ, 'उहाँ मै हो।'
नवराज पराजुलीका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः